APHIDS ON GEED TUFAAXA - WAXA LA SAMEEYO, AMA SIDA LOO MAAREEYO APHIDS ON GEED TUFAAX AH - GEED GEEDEEDKA
Aphid geedkii tufaaxa waxaa laga yaabaa inay u muuqato in uu yahay mid sareeya, sidaas darteed qof kasta oo doonaya inuu ilaaliyo dalaggooda, waa muhiim inaad ogaato sida loola macaamilo. Aphid waa cayayaanka yaryar, xajmiga aan ka badnayn 4-7 mm, si kastaba ha ahaatee waa cayayaanka ugu khatarsan ee beerta iyo miraha miraha. Kumanaan ka mid ah geedaha tufaaxa ayaa cayayaanka cayayaanka leh ay soo weerareen sanad walba, iyada oo khasaaro weyn ay soo gaartay. Waqti gaaban, aphids dhowr ah ayaa isu rogi kara isku-dhafan oo dhan iyo hel meel kasta, maadaama ay u haajiraan hawada. Waxaa jira tiro ka mid ah tallaabooyin wax ku ool ah oo ka hortag ah oo looga hortago aphids on geedo tufaaxa, taas oo kaa caawin doonta yaraynta suurtogalnimada ah dhalmada ee beerta ee cayayaan this.
Waa maxay sababta aphid u muuqato on tufaax, iyo sida loo helo
Geed dahab ah ayaa ku dhuftey midab guduudan ama midab leh oo ku wareegsan 2-3mm, oo leh madaxa casaanka iyo dhabarka madow iyo daboolka. Ukuntu waxay ku dhaafsiisaa jilif geedka tufaaxa, gabadha gu'ga waxay ku dhashaa iyaga, kuwaas oo gacan ka geysanaya soo saarida gumeysiyada oo dhan geed. Dumarka cayayaanku waa kuwo bacrin ah waxayna soo saari karaan 40 dirxiga mar. Faallooyinka firfircoon waxay ku dhuftaan Sebtembar. Weerarada Aphid kaliya kuwa dhirta oo leh maadooyin badan oo ah astaamaha amino ee casiirka caleemaha. Tan waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay la'aanta potassium, fosfooraska, ama xadiga nitrogen. Aqoonsiga aphid on tufaax waa fududahay: caleemaha saameeyeen waxay bilaabaan inay cufan, rogaan oo madoobaan. Markaas boogaha cas ee muuqaalka caleemaha, taas oo tilmaamaysa marin kale oo dhimanaya caleen.
Sababtoo ah guul darradii aphids, caleemaha waxay ku daboolaan dareeraha dhegaha. Tani waa suufka oo ay ku yaallaan beeraleyda. Aragtida quraanjada waa mid ka mid ah calaamadaha jiritaanka aphids ee geedaha tufaaxa. Marxaladaha hore waxay ku adagtahay in la garto cayayaan ah geed, sida aphid uu bilaabmayo inuu ku dego dusha sare. Waqti ka dib, marka cayayaanka ay cunaan dhammaan caleemaha cusub ee xayawaanka, waxay ku dhaadhacaan laanta hoose, halkaas oo ay ku sahlan tahay in la ogaado, oo kaliya ku filan in ay soo rogaan caleen kasta. Laga soo bilaabo, marka laga reebo cunista caleemaha, cayayaanka waa halis ah cudurada viral, waa lagama maarmaan in la burburiyo aphids on geedka tufaax isla markiiba ka dib markii la ogaado.
Nasiib darro, xitaa meelaha ugu wanaagsan ee la farsameeyey oo si habboon loo shaqeeyaa waxaa jira feejignaan sareeya oo ku dhufanaysa geedka tufaaxa by aphids. Maadaama ay cayayaankaasi u soo gudbi karaan hawada, waxay si fudud ugu duuli karaan meelaha deriska ah.
Ma taqaanaa? Aphid - mid ka mid ah kooxaha ugu caansan, kuwaas oo isku keena 4000 nooc. Kuwaasi waxay ku dhowaad 1,000 ku nool yihiin Yurub. Sannad kasta, saynisyahannadu waxay sharxaan noocyo badan oo cusub oo cayayaankan ah.
Sida loo ilaaliyo geedo iyo geedo baaluq ah oo laga soo bilaabo aphids
Maanta, warshadaha kiimikada ayaa si firfircoon u kobcaya oo loola dagaallamo cayayaanka cayayaanka, oo ay ku jiraan aphids, waxay bixin karaan noocyo badan oo cayayaanka. Isla mar ahaantaana, beeralayda khibrad leh waxay isticmaalaan hababka xakamaynta cayayaanka ee cayayaanka kuwaas oo xaqiijiyay in ay waxtar leeyihiin. Intaa waxa dheer, qaababka bayoolojiga ee xakamaynta cayayaanka ayaa si weyn loo isticmaalaa si looga hortago. Marka xigta, waxaan eegnaa sida loo ilaaliyo dalagga tufaaxa ee aphids.
Si kastaba ha noqotee, tixgelinta waxtarka hal ama hab kale ee lagu xakamaynayo cayayaanka cayayaanku, midna ma soo wici karo hal hab oo xeeldheer kiisaska oo dhan, maaddaama waxtarka tallaabadu ku xiran yahay xaaladaha goobta, tirada geedaha iyo dhirta la xidhiidha. Mararka qaarkood waxaa xitaa lagama maarmaan ah in la daboolo dhammaan tallaabooyinka qalliinka, sababtoo ah aphid waa noolaha nool, oo wuxuu ku kobcin karaa mukhaadaraadka hal ama hab kale.
Waa muhiim! Ha yareynin waxyeellada ah in aphid uu sameeyo xayawaanka tufaaxa. Noocyada noocyada badani waxay ku fidiyaan cudurrada khatarta ah iyo fayrasyada dhirta waxayna keeni karaan caqabado kala duwan, sida guntooda iyo qaababka cagaaran, kuwaas oo aan suurtagal ahayn in laga takhaluso.
Haddii tiro badan oo cayayaanka ah oo cunaan aphids (tusaale ahaan, lying qabow) lagama helin goob beerta, ka dibna waxay noqon doontaa habka ugu saxsan ee lagu burburiyo daawooyinka kiimikada. Waa mid aad u muhiim ah inaadan seegin wakhtiga qorsheynta ee wax ka qabashada aphids. Guga hore, marka ubbooyinku waxay bilaabayaan inay ubaxaan, oo waxaa jira wakhti ku filan oo lagu hagaajiyo dhirta aphids. Inta lagu jiro muddadan, suurtogalnimada in gubashada caleemaha la yareeyo, laakiin dhaawac maskaxda ah ayaa noqon doona mid muhiim ah.
Daaweyn aad u wanaagsan oo lagu baabi'inayo noocyada ugu badan ee dirxiga iyo cayayaanka ayaa ah Nitrofen. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu qiyaaso 200 g oo ah daroogada 10 litir oo biyo ah iyo geedaha cudurka qaba ka hor inta aan la gooyin. Sidoo kale waa mid aad waxtar u leh "Olekuprit", xalkeeda 4% waxay sidoo kale burburisaa ukunta. Ka hor inta aan ubaxin geedka tufaax, Kinmiks ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa. Waxaa kaliya lagu muujiyay in la dilo cayayaanka oo nuugaya caleemaha ka soo juus ah iyo gowsing dhirta.
Xalka waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo talooyinka tilmaamaha, ka dib marka la buufinayo daroogada ayaa bilaabi doonta saacad gudaheed waxayna ilaalineysaa geedka laba ilaa saddex toddobaad. Faallooyinka kale ee dhirta ee caan ku ah beeralayda waa Karate iyo Inta-Vir. Hore waa isticmaalka dhaqaale ahaan: 10 litir oo xal ah ayaa ku filan in la dhiso 1 boqol mitir oo labajibaaran oo dhul ah. Iyo labaad, "Inta badan", si wax ku ool leh ula dagaallama wax ka badan 50 nooc oo cayayaanka, oo ay ku jiraan aphids apple. Mashiinka kaliya ma aha mid ku filan in la gooyo aphids, si kastaba ha noqotee, dib-u-daaweyn, udiyaar garoobida ayaa loo baahan yahay kaas oo aan gubi doonin caleemaha. Kuwaas waxaa ka mid ah "Iskra", "Decis" iyo "Cypermethrin". "Spark" - qalab wax ku ool ah oo gacan ka gaysan doona in la burburiyo dirxiga yar yar inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee geedka tufaaxa. Waxaa lagama maarmaan ah in la kala diro 1 kiniin ah daroogada 10 litir oo biyo ah. Waxaad ku xiri kartaa dhirta xalka this 18-20 maalmood kasta.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay tirakoobka, celceliska qadarka daaweynta apple leh cayayaanka ee xilliga soo kordhaya waxay ku taal bariga koonfureed - 13-16, bartamaha - 8-10.
Sida loo wajaho aphids on hababka dadweynaha tufaax
Xitaa awowayaasheen waxay ogtahay sida looga takhaluso cayayaanka on geedo tufaax ah, bannaanka u isticmaali cuntada ay maanta. Waxaa jira noocyo fara badan oo isdifaac iyo xalal ka soo horjeeda cayayaanka si fudud loogu diyaarin karo guriga iyagoo isticmaalaya aaladaha la heli karo. Intaa waxaa dheer, in badan oo lagu daro xalalka noocan oo kale ah waa in ay yihiin jawi bey'adeed oo ku habboon kuwa kuwa ka shakisan ee kiimikada sunta ah. Bannaanka u khibrad badan ayaa soo gabagabeeyay in aphid aysan ku weerarin dalagyada sida cagaarka loo soo bandhigay sababtoo ah waxa ku jira potassium iyo fosfooraska. Sidaa darteed, waa mid aad wax ku ool ah in la soo mariyo dharka sare ee xididka leh ku jira ash, iyo sidoo kale in la buufiyo tufaax laga soo aphids xal xal ah. Si aad u diyaariso xalka waxay u baahan doontaa 10 litir oo biyo ah iyo 2 koob oo ah ash. Si aad si fiican ugu xalliso xalka, waxaad ku dari kartaa 50 g saabuun suuf. Iska ilaali cufka iyo ha u istaag, ka dibna ku buufin dhirta, ujeedada dhinaca kale ee caleemaha.
Wuxuu caawiyaa inuu la dagaallamo aphids celandine cawska. Haddii ay ku koraan boggaaga, waxaad diyaarin kartaa decoction ah inaad ku buufiso. Celandine kilogram ku shub 3 litir oo biyo ah karkaraya, ka dibna ku dar xalinta 7 litir oo biyo ah. U ogolow xalkan inuu ku dilo 2 maalmood, ka dibna buufin geedka tufaaxa.
Xalka sarbadu waa daaweyn kale marka loo barbar dhigo aphids. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto 5-6 oo toon ah oo toon ah, ku qoyso 1/2 koob oo biyo ah, ka bax 24 saac. Ka dibna ku dar 1 tsp. saabuunta dareeraha ah iyo 2 tsp. saliidda cuntada. Iska ilaali oo qallaji massa soo baxa biyo ku jira weel saddex litir ah. Daawee aagagga ay saameeyeen oo leh dhalada buufin. Waxaa si fiican u cadeeyaa cayayaanka xakamaynta tubaakada, taas oo isla markiiba loo isticmaalo ka dib markii la ogaado aphids. Qaado 200 garaam oo tubaako qiiq ah ama tubaako iyo laba maalmood, ku dheji 5 litir oo biyo ah. Kadibna cadaadis oo ku dar 5 litir oo biyo ah iyo 50 g oo saabuun ah. Si fiican u walaaq oo buufin geedaha. Cuntada kale waxay ku saleysan tahay isticmaalka daboolka basasha: 200 g oo ceel ah ku adkeysanaya 10 litir oo biyo kulul ah 4-5 maalmood. Daadi dhirta la yareeyo geedaha saddex jeer 5 jeer.
Iyo dhadhanka ugu dambeeya ee daawada loo yaqaan "aphid medicine" ee geedo tufaax ah, oo ay soo mareen beeralayda oo tixgelinaya ugu waxtarka badan. Baaldi biyo kulul, waxaad u baahan tahay inaad kala gooyo 200 g oo saabuun ah, galaas oo ah maraq foorno ah oo shukul ah, nus koob quraarad leh oo lagu qasi karo koobka sedexaad ee kerosene. Xitaa iyada oo dhalashada mass ee aphids sida xal xal u shaqeeya.
Waa muhiim! On caleemaha of tufaax waxay u muuqan kartaa scurf mugdiga ah, taas oo macnaheedu yahay in geedka waxaa lagu saameeyaa fungus caraf. Si aad uga takhalusaan cudurkan, waxaad u baahan tahay in la burburiyo aphids.
Hababka bayoolojiga: waxa loo abuuro sida tufaax laga soo bilaabo aphids
Habka xakamaynta bayoolojiga ayaa go'aaminaya sida loo ciribtiro aphids ee geedka tufaaxa iyadoo la adeegsanayo noolaha nool, iyo sidoo kale beeritaanka dhirta iyaga oo cabsiinaya.
Qiyaasaha bayoolojiga waxaa ka mid ah:
burburinta dabiicadaha. Qudhaanjadu waa kuwa u dooda aphids, sababtoo ah waxay ku quudiyaan suufka macaan ee la sii daayo;
beeritaanka dhirta dhirta ee dhirta khaaska ah ee ka midka ah aphids ma jecla. Carafka macaan ee macaan, Dalmatian chamomile, calendula, yaanyo, toon ama tansy ayaa ka ilaaliya cayayaanka kala duwan ee geedaha khudradda, oo ay ku jiraan aphids. Waxaa sidoo kale jira dhirta oo aad u soo jiidata aphids, taas oo aan lahayn kari ah lagu beeray agagaarka geedka tufaaxa. Waxay yihiin sida nasturtium, macmacaanka hypnotic, kosmeya, mallow, begonous begonia, viburnum iyo linin;
dhismaha naasnuujinta iyo abuurista shuruudaha shimbiraha ee caarada jilicsan. Waxay yihiin shimbiro, linnets, robins, tits;
beerashada cayayaanka sida ladybugs, hoverflies, duqsiyo dahabka ah iyo indhaha qaar ka mid ah wasps in cuno aphids.
Si aad u soo jiidatid dareenka cayayaanka iyo shimbiraha, waxaad u baahan tahay inaad ku beerato geedo udgoon leh oo qajilaad ah iyo marabooyin ku xiga geedka tufaaxa.
Ka hortagga Aphid on geedaha Apple
Maadaama aysan aheyn hawl fudud oo lagula dagaallami karo aphids geedo tufaax ah, oo u baahan in la helo hab isku dhafan, ma ahan mid aad u adag in la ilaaliyo tallaabooyin ka hortag ah si loo yareeyo khatarta weerarka soo noqnoqda ee soo noqnoqda. Ka hor inta aanad soo iibsanin alaabada wax beerto, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u baaro, maxaa yeelay aphid waxay heli kartaa goobta iyo geedo.
Aphids kuma qaniin karto caleemo cufan oo cufan, sidaas darteed waraabinta iyo waraabinta joogtada ah, codsiga bacarinta, mulching iyo rusheynta treetops waa lagama maarmaan. Sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in aan lagu kordhin geedka tufaaxa leh Bacriminta nitrogenous, xitaa kuwa organic, sida dufanka digaagga. Tani waxay sidoo kale keentaa aphids. Ka hor intaadan ka tegin beerta tufaaxa ee xilliga jiilaalka, waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo dirxiga xaraashka ah ee degay muddadan muddada geedka tufaaxa. Si arrintan loo sameeyo, xilliga dayrta waxay nadiifinayaan caleenta geedaha. Si taxaddar leh, iyada oo aan waxyeello ka soo cayayaanka caafimaadka leh ee geedka, ku xoqdo jilif dhintay oo ku yaalla garbaha iyo laamaha qalfoofka leh burushka ama buraashka cirka. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad filim ku dhigto si ay qaybo ka mid ah xayawaanka qaba cudurka aphids ma ku dhicin agagaarka geedka. Ka dibna wax walba soo qaado oo gubi, weheliyaan caleemaha xididka iyo maskaxda, kuwaas oo sidoo kale la gooyaa.